Somaliland oo ku dhawaaqday inay sii deyneyso Wiil loo xiray Calanka Soomaaliya - Awdinle Online
Somaliland oo ku dhawaaqday inay sii deyneyso Wiil loo xiray Calanka Soomaaliya
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland, Maxamed Kaahin, ayaa sheegay inuu sida ugu shaqsiyaha badan ugu howlgalayo sidii Somaliland usii dayn lahayd wiil dhalinyaro oo lagu magacaabo Bilaal Bulshaawi, oo muddo ku dhow labo bilood ku xiran Hargeysa.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa hadalkaan ka sheegay kulan lagusoo dhoweynayay Duuliye Axmed M Xasan “Axmed Dheere” oo xilligii dowladdii dhexe iska diiday in diyaarad uu duuliye ka ahaa duqayso Hargeysa.
Bilaal Bulshaawi oo caan ka ah barta Tiktok, ayaa loo xiray kadib markii isagoo Hargeysa ku sugan uu bulshada la wadaagay calanka Soomaaliya oo lagu dhex sawiray koob Shaah ah.
Hay’addaha dambi baarista Somaliland, ayaa codsaday in xabsiga lagusii hayo Bilaal, kadib markii maxkamada lasoo taagay dhawaan.
Previous articleDil ka dhacay Muqdisho & Faah faahin laga helayo
Next articleDEG DEG: Dagaal ka socda Xaafad ka tirsan Magaalada Muqdisho